Wasiirka Diinta Iyo Awqaafta oo dhagax dhigay Masaajid iyo dugsi laga dhisayo degmada Axmed Dhagax | Somaliland.Org
Wasiirka Diinta Iyo Awqaafta oo dhagax dhigay Masaajid iyo dugsi laga dhisayo degmada Axmed Dhagax
July 31, 2012	HARGEYSA (Somaliland.Org)- Wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil C/laahi Axmed ayaa maanta dhagax dhigay masjid iyo dugsi laga hirgalinayo xarunta degmada Axmed Dhagax ee caasimada hargaysa.
Wasiirka Awqaafta oo ay wehelinayeen madaxda hay’ada waxbarashada ee Geeska Afrika,Qaybta markiska ayaa ka kooban afar qaybood,oo lagu baran doono dawaarka ,culuunta kombuyutarka,iyo cunto karinta.
Wasiirka Wasaarada Diinta iyo Awqaafta sheikh Khaliil C.laahi Axmed ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay dhismahan la rabo in laga bineeyo goobtii hore loo odhan jiray hanuuninta ee xaafada iftin isla markaana ku talo galku yahay in lagu barto culuunta kala duwan,Wasiirka waxa uu xusay in markii dalka lagu soo noqday sannadkii 1991-kii inuu isagu jiingada saaray dhismahan oo dunsanaa laguna baran jiray qur’aanka kariimka ah.
Wasiirka diinta iyo awqaaftu waxa uu bulshada u soo jeediyay in maadama lagu jiro bishii barakaysnayd ee ramadaan ay xooga saaraan waxyaabaha khayriga ah ee ajarka laga helayo.
Madaxa Mashaariicda ee Hay’ada Geeska Afrika Sh.C.raxmaan Aadan Cige ayaa madashaasi ka sheegay in hay’ad ahaan ay ku hawlan yihiin mashaariicda samo falka ah,waxaanu intaas ku daray inay markiskani uu qayb weyn ka qaadan doono kor u qaadka waxbarashada . Cumar Maxamed Faarax
Previous PostWasiirka Warfaafinta oo dhagax dhigay Mashaariic iyo Dhismeyaal laga hirgalinayo wasaaradaasNext PostNew clinic opens for people with neurological conditions in Somaliland	Blog